abcnepali | » खाडीमा ११ लाख नेपाली जोखिममा , विमान चार्टर्ड गरेरै मध्यपूर्वबाट नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी ! खाडीमा ११ लाख नेपाली जोखिममा , विमान चार्टर्ड गरेरै मध्यपूर्वबाट नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी ! – abcnepali
काठमाण्डौं: इरान र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दै गए मध्यपूर्वमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका १० लाखभन्दा बढी नेपाली जोखिममा पर्ने भएका छन् । इराकलगायत मुलुकमा रहेका नेपाली अहिलेसम्म सुरक्षित रहे पनि संकट थपिँदै जाँदा उनीहरूको उद्धार गर्न तयारी हालतमा बस्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
इराकमा नेपाली कूटनीतिक नियोग नभएकाले कुवेतस्थित राजदूतावासले नै इराक हेरिरहेको छ । ‘इराकमा रहेका नेपालीसँग हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ । उनीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । कामदारलाई कम्पनीले सूचित गरेको छ । तर, अहिले नै डराइहाल्ने अवस्था नरहेको नेपाली कामदारले जानकारी गराएका छन्,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले टेलिफोनमा भने । नयाँ पत्रिका दैनिक